Ndeupi musiyano pakati peturu peturu uye EFI rori?
1. Unhu hwakasiyana: EFI mota dzakagadzirirwa nemagetsi zvinodzorwa mafuta jekiseni majekiseni. Iyo ipfupi kune enjiniya inodzorwa nemagetsi peturu injinjini. Irori yepombi yekongiri ndeye muchina unoramba uchiendesa kongiri pamwe nepombi uchishandisa kudzvinyirira, uye unoumbwa ...
by pamusoro 20-03-26
I. Small pombi rori fuertes kubva plunger pombi kana injini (1) kubvisa chinoshamisa mumwe kukonzera kunyanya Mheremhere hydraulic pombi. Kana mhepo yakavhenganiswa kupinda mafuta, zviri nyore kuti vaumbe cavitation wayo mukuru kumanikidzwa nzvimbo uye kuparadzira muchimiro kufurirwa mafungu, zvichiita mafuta kuti osci ...
Mushure kongiri pombi Rori iri dzakamiswa kwenguva refu, zvokungwarira kutanga yokuvaka
by pamusoro 20-03-18
Vharuvhu marori mafuta rokuongorora: Check uye kutsiva sezvo zvakakodzera Chassis: injini coolant, injini, hutachiwana, transaxle mafuta. Body vachizvitakudza: Pasinei kuchinjwa nyaya, muhombe yokuderedza, pombi mafuta uye hydraulic mafuta pamwero zvakakwana. Security Check: Check uye kuchinja kana tsvedzesa sezvo appropri ...
by pamusoro 20-03-10
Zvokuita kana lubrication pfungwa rapera munguva kuvakwa? Concrete Pombi marori vari zvinowanzoshandiswa zvikuru pakuvaka nzvimbo. Kudzidza kungoita kugadzirisa lubrication pfungwa kukundikana panguva kuvakwa kunogona kuvandudza zvikuru kuvakwa kunyatsoshanda. The lubrication akajekerwa chesamende pombi rori hove dzakawanda ...
by pamusoro 20-02-17
CONELE kongiri pombi Rori iri zvinoberekwa Qingdao CONELE Group Co., Ltd., vachishandisa yemhando ruzivo kumba uye kunze uye ano yemhando kombiyuta simulation michina kuti zvakanyatsorongwa kuongorora kunetseka uye misha kuti pombi motokari mamiriro. The simba siyana parameters akadai Natura ...
About CONELE 38M Concrete Boom Pump Rori
by pamusoro 20-01-18
Conele Group chikuru chigadzirwa, 38m kongiri tiguu pombi rori, zvikuru yakagadzirwa ne European maindasitiri magadzirirwo chikwata nokuda musika dzakawanda, anoshandisa SINOTRUK T5G chassis dzakakwirira configuration uye mutengo performanceand uye yepamusoro akavimbika uye mafuta rinoponesa German Man simba. Large yerera Electronic cont ...
Ko zvakadini zvaunoziva pamusoro zvinoyerera kumhanya Concrete Boom Pump Truck?
by pamusoro 20-01-15
The goho kumhanya Concrete Boom Pump Truck depands pamusoro zvinhu zvakawanda, zvakadai, pombi mushandi kure kudzora misha uye kongiri unhu. Tichingotarisa, kuti goho kumhanya nekongiri tiguu pombi rori anogona kusvika pamusoro 190m³ / h.However, hahungangovi akapotsa kuti nokukurumidza mune zvinoshanda kugadzirwa mu consid ...
Sei kusarudza zvakanaka pombi rori?
by pamusoro 20-01-06
Chokutanga, tarisa unhu configuration maatomu akafanana. Chinonyanya kukosha nekongiri pombi rori iri hydraulic pombi, izvo anoronga mabasa chesamende pombi yose rori. Sarudza nani hydraulic Pombi anogona kukubatsira kushandisa nayo kwenguva. Uyezve, hydraulic vharafu uye hydraulic mafuta cyl ...
by pamusoro 19-12-25
Small kongiri pombi Rori imwe rinonyanya kushandiswa kuvaka zvokushandisa pakuvaka ouinjiniya indasitiri. Zvinonzi zvinowanzoshandiswa siyana youinjiniya construction.However, pachava nevamwe zvikanganiso mukushanda iri nedanho kushandiswa yedu zuva nezuva, izvo zvingaita kuti kunonoka breMwe- ...
by pamusoro 19-11-21
Kana nenyere twa pasi, kana zvinodiwa kongiri pombi muridzo unoridzirwa riri guru, chesamende zvibudire pasi nokuda yayo uremu ari Mapaipi vachida, zvichikonzera isina iri irikupa nyere kana zvichiita kongiri kuti rusaruro nokuda kuzvipira inoyerera, nokudaro achiita kuti conveyin ...
Ipfungwa Ndinofanira kuteerera kana kupomba kongiri pombi?
by pamusoro 19-11-08
Kuva akatendeseka, pombi rave rakavhurika kwenguva refu uye sezvingatarisirwa ane zvimwe ruzivo! Zvakananga, zvinokosha kutarira zvinhu. Pane zvinhu zvinoverengeka kuti hazvigoni kushandiswa. 1. Too yakaoma zvinhu yasvika nguva apo hazvingaiti ndokuyerera. 2. akaparadzanisa zvinhu, jecha uye ibwe S ...
Mantainence YePombi yeKrete
by pamusoro 19-05-09
Ndezvipi zvikonzero vatengi kusarudza Konelux kongiri pombi?
by pamusoro 19-04-28
Concrete Pombi ndiyo michina mukuru kuti kupomba kongiri. Chine hunoshandiswa zhinji, ngura kuzvidzivirira uye kusakara nemishonga. Rinogona kushandisa asidhi uye alkali mbishi zvekushandisa. Panguva iyoyowo, chesamende pombi yakataurwa Koneile anoratidza zvayo zvakanaka uye ari yakakurumbira kupfuura zvavo kongiri pumps. Kuti uzo ...
Concrete Distributor yokuvakira, zvakasiyana-siyana okugumisa nzira kukudzidzisa
Mazuvano, kuti aponese mari uye rikurumidze kuvaka kwacho, kuvaka indasitiri kazhinji anoshandisa kongiri Distributor pakugovana mumwe rukoko kupinda kuvakwa zvikamu zviviri. Chimwe chikamu ndiyo kongiri kudururwa kana munyu, vamwe ndechokuti simbi nemizariro, formwork, muvezi uye zvichingodaro. Two S. ...
Tinofanira Concrete pakavha zvakanaka kuitira kuti kuvakwa kushanda nekongiri Pombi kukonzera nani?
by pamusoro 19-04-12
Tinofanira Concrete pakavha zvakanaka kuitira kuti kuvakwa kushanda nekongiri Pombi kukonzera nani? Uzvichenjerere kushandisa kongiri pakuvaka kongiri pumps: Muchirimo kongiri kudira tembiricha kuzvidzora, kuitira kudzivirira yokuchengetera zvinhu pamusoro kongiri tembiricha ris ...
Ndezvipi zviyero zvinofanira kutorwa kana nenyere blockage uye Tubing vakadambura kuitika munguva duku kongiri pombi motokari?
Kana nyere blockage kunoitika, ayo chikuru zviratidzo ndivo: achizviendesa zvakanaka pombi kutanga, havagoni kubudirira chaisazvitsigira. Muchiitiko chino, unogona daka F1, ipapo achizviendesa zvakanaka pombi kutanga bhatani kuona sei zvikuru aomerwa geji huru kwava. Kana mutengo kwakaratidzwa pamusoro kufurirwa geji ndiyo 31.5 Mp ...
Kugadzirira vasati uye pashure kuvakwa duku kongiri pombi marori-Conele Group
by pamusoro 19-02-14
Small kongiri pombi rori, sezvinoita inowanzoshandiswa zvokuimba midziyo iri yokuvakira, anoita pachena basa kuwedzera kuvaka simba, asi zvinokoshawo chaizvo kuronga zvikwepa vasati uye pashure kuvakwa. Kana pasina nenguva kurapwa zviduku kongiri pombi rori residual guruva, ...
How kuisa Mapaipi
by pamusoro 19-01-14
Zvakananga, chesamende nezvifambiso pombi muridzo unoridzirwa zvinofanira kusarudzwa uye configured maererano zvechadenga chirongwa uye yokuvakira, kufadza uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. kukura, kongiri pombi mhando, zvokufambisa kure uye zvakanaka chokufambisa. Kana muridzo unoridzirwa, nokureba Mapaipi Sho ...
Ndezvipi zvinhu kaduku pombi rori kuva vakanaka pombi rori?
by pamusoro 19-01-10
Ndezvipi zvinodiwa kuti munhu akanaka duku pombi rori? Kunze yokuisvonaka nemicheka umhizha, chii chimwe zvinofanira kukurukurwa? Yakadzikama waivako Pashure pemakore ruzivo, CONELE Group kwakasimbiswa ndokuiswa kugadzirwa duku Pombi marori kuburikidza zvachose hwokugadzira tsvakurudzo uye deve ...
How kushandisa Small Pump Truck
by pamusoro 19-01-03
1.Loose Fani In nhengo achangobva kupatsanurwa uye vakaungana, pane kusiyana mune geometric chimiro uye enzanirana kukura. In kuchava kutanga kwekupwanyiwa kushandiswa, zviri nyore kuti nokuda rakatumbuka mutoro akadai kwechirwere uye vibration, uyewo simba kupisa uye deformation, uye excessi ...
anoita kongiri yako chisanganiso kusuka kakawanda sei?
by pamusoro 18-12-18
Vatengi vakawanda aitenga yedu Konegra kongiri chisanganiso vane mubvunzo: kakawanda sei muchina kucheneswa? Kutyira kuti kuchenesa achaita kupambadza zvinhu kana kushandiswa, kwete kugeza uye kutya ichivharira nomutopota. Kuti nani kushandisa kongiri chisanganiso pasina kukanganisa basa, Koneile Mach ...
bauma China 2018 | Perfect nekuguma, CO-NELE Group anoda kusaina hombe mirairo!
Newsletter: Bauma China 2018 ndiro rava kupera kuvakwa, uye E7.801 dumba awana akanaka kubva Konecra Group. Pazuva rokupedzisira BMW Show, isuwo yakasainwa mudzimba uye dzakawanda hombe mirairo! Domestic maodha zuva vaiva mamiriyoni 30, uye dzimwe mirairo vakanga mamiriyoni 10! Produc ...
Kuziva zvakawanda pamusoro CO-NELE tiguu pombi rori
by pamusoro 18-11-23
Daily kwerunyararo Concrete pombi
Kazhinji, ari kushanda hwaiitwa chesamende pombi achiri utsinye, pose chinhu ine chaizvo muchina, chokwadi, rinofanira zvinochengetwa nguva. Kureba kongiri pombi upenyu basa anezvakawanda chokuita nezuva Nokuraramisa nzira. Zvinotevera Qingke Xiaobian Int ...
Safety zvokungwarira nokuti Munotatamura ari kuwedzera nekongiri pombi
by pamusoro 18-11-02
1. Asati kunoshandisa tiguu, zvinofanira yasimbiswa kuti pombi gumbo yave anotsigirwa. Kunoshandisa tiguu vanofanira kutevera murayiro kushanda. 2.In mabhanan'ana kana mamwe mamiriro asina kunaka ekunze, haugoni kushandisa kuwedzera. The tiguu haagoni kushandiswa ekunze kupfuura 8. 3. Kana operatin ...
About nezuva rokuongorora yakaisvonaka ibwe kongiri pombi, tarisai ichi!
About nezuva rokuongorora yakaisvonaka ibwe kongiri pombi, tarisai ichi! Sezvo mugadziri choupfu ibwe kongiri pumps kwemakore akawanda, CO-NELE boka rave akapfupikisa nezuva rokuongorora yakaisvonaka ibwe kongiri pombi uye nyaya zvinoda kugadziriswa. Zvino isu kugoverana kwamuri, zvose unofanira kuita baya him ...
How kutenga kongiri pombi rori
by pamusoro 18-10-16
With kukurumidza kukura upfumi, musika kudiwa kongiri pombi rori wakaratidza kuitika ichikwidza, akawanda Muvaki kuti kupfupisa rokuvaka nguva, kuderedza kuvaka cost, achibatsirwa imwe kongiri pombi rori kuti rikurumidze kuvakwa. Zvisinei, zviri zvikuru choos ...
Shanghai BAUMA 2018 Exhibition Kukoka
by pamusoro 18-10-11
nguva ino Qingdao CO-NELE BOKA achatora subsidiarires dzedu 1.Qingdao Qingke Heavy Industry Co., Ltd, 2.Qingdao Xinxing Machinery Co., Ltd, 3.Qingdao CO-NELE Machinery Co., Ltd, 4.Qingdao Enpu Environmental Equipment 5.Qingdao BST Co., Ltd 6.Qingdao huite Heavy Industry Co., Ltd pamwe kutora chikamu ...
Sei tiguu pombi rori vanofanira kuchinja famba humburumbira kana Simbiso zvindori nguva dzose?
by pamusoro 18-09-30
Ko pombi varidzi vanowana kuti kupomba sepombi vakavapoteredza makavhuna mafuta zvisimbiso ari Swing sepombi, uye famba sepombi kazhinji kushandura zvisimbiso, asi ivo vachiri achigarira maoko mafuta, uye kunyange kazhinji kuchinja Swing sepombi, izvo zvakachinja kaviri pamwedzi ? Chii dambudziko pamagumo, ho ...
Yakarurama danho kubatanidza Mapaipi
by pamusoro 18-09-26
Small Pombi marori rinogona kushandiswa pachinzvimbo pombi panguva kushanda nekongiri kupomba. The takeover idanho rinokosha. Pamberi kupomba kuvaka, Mapaipi inofanira kutanga dzateyiwa. Kana Mapaipi isina chokuita zvakanaka, zvinogona kukonzera mutopota jamhu dambudziko, izvo zvakananga kunokanganisa ...
Kusuma pamusoro CO-NELE kongiri tiguu pombi rori
kwekurasira nyaya 29m-4M uye 33m-4M
2018/9/1 CO-NELE 29m uye 33m yokumusoro chikamu tiguu pombi ekisipoti kuna Indonesia. Akasvinudzwa zvakawanda musika mugove South Asia. CO-NELE muchiso wayo yepamusoro zvinhu uye mukuru zvesimba basa rose.
Qingdao CO-NELE Group Listing pagpirma seremonya
Sa Disyembre 5, 2016, sa pagpirma alang sa listahan sa Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd. gihimo sa mga punoang buhatan sa CO-NELE Group. Ang kalamboan sa niini nga proyekto nagtimaan sa opisyal nga pagsulod sa CO-NELE Group ngadto sa kaulohan sa merkado. Mr. Lijin Lin, Chairman sa CO-NELE Group, Mr. Litao Ya ...
Achiisa kongiri zviitiko
Sa 2011, CO-NELE mobile panapton machine nakatabang Wuxi Suning Plaza sa pagtukod sa unang kinatas-building sa Wuxi; Sa 2016, ang CO-NELE Pagsaka Molding Machine mitabang sa pagtukod sa Yinchuan Greenland Group, nga gihimo sa unang tag-as nga building sa Yinchuan 301 metros; Sa 2016, ang CO-NELE pagsaka c ...
Boom Pump trak Operation Notice
1. Ang paggamit sa sakyanan chassis, internal combustion engine, air compressor, sa tubig pump, hydraulic device, ug uban pa, nga naglangkob sa usa ka konkreto nga pump trak, mahimong ulipon ngadto sa kinatibuk-ang probisyon sa sakyanan ug sa mga may kalabutan nga mga probisyon sa kongkreto nga pump. 2. Ang nahimutangan sa kongkreto nga ...